I-AirPods 3 kunye ne-Apple Music Hi-Fi ngoLwesibini, nge-18 kaMeyi? | Ndisuka mac
Amarhe malunga nokufika kwe-AirPods 3 entsha ngaxeshanye ukuba kukuphuculwa komgangatho wesandi seApple Music kusekho nangoku. Kule meko kunjalo Amarhe okubeka ukufika kwezi AirPods zintsha kunye nomgangatho weaudio ye-Hi-Fi kwi-Apple Music ngoLwesibini olandelayo, nge-18 kaMeyi.
Iindaba ezimalunga nesizukulwana esitsha seAirPods zivela kude kwaye kule meko kubonakala ngathi banokuba kufutshane kunangaphambili kwinkcazo-ntetho yabo. Ayizondaba ziqinisekisiweyo nguApple, kude kuyo kwaye iApple ayilindelwanga ukuba ibambe umsitho kuyo, iyakubazisa nje kwiwebhusayithi njengohlaziyo kwaye iya kusasazeka kwinethiwekhi ngokukhawuleza njengesiqhelo.
Iindaba / amarhe avela esandleni se-youtuber
ULuka miani ebephethe ukubonisa iindaba abazipapashe ngaphambili I-AppleTrack. Kanjalo amarhe malunga nokufika kwezi AirPods zintsha zivela kude kwaye asinakugweba nakweyiphi na into enokwenzeka kuba iyimveliso ekufuneka ifike mva kwangexesha, nokuba kuseWWDC okanye ngaphambili.
Ngoku kulindeleke ukuba ngolwe-Lwesibini olandelayo umhla we-18 sizokumiliselwa kwezi ntloko zintsha zingenazingcingo ezivela kwa-Apple ezinokuba noyilo olufana kakhulu nolo lwe-AirPods Pro yangoku kodwa ngaphandle kwenxalenye yesilicone kwaye ngaphandle kokurhoxiswa kwengxolo. Siza kulinda ngoLwesibini olandelayo malunga nayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » I-AirPods 3 kunye ne-Apple Music Hi-Fi ngoLwesibini, nge-18 kaMeyi?
Bubuphi ubuyatha, baya kuba ngathi batshaja ii-airpods ezingenazingcingo 2 kodwa njengenoveli, inomdla, wokuphela kwebali.